OpenMandriva Lx 4.0 ichakurumidza kuburitswa | Linux Vakapindwa muropa
OpenMandriva Lx 4.0 iri pedyo kuburitswa
OpenMandriva Lx iri kugovera kweLinux yakagadzirwa uye yakanangidzirwa kune ese marudzi evashandisi, kugovera uku kunogoverwa uye yakagadzirwa nesangano rinodaidzwa kuti OpenMandriva, iri musangano usingabatsiri.
Kugoverwa kweLinux Iyo yakavakirwa paMandriva Linux iyo yaive kugoverwa kweFrance, isinganyanyo kufarirwa pakati pevashandisi veLinux, asi imwe iyo vamwe vashandisi vakatokurudzira.
Mandriva Linux yaive Linux kugovera kwakaburitswa nekambani yeFrance Mandriva yakagadzirirwa vese vanotanga uye vashandisi vane ruzivo, yakanangana nemakomputa ako ega uye maseva nekutarisa kune vashandisi vari kuzvizivisa pachavo kune nyika yeLinux uye yemahara software.
1 Nezve OpenMandriva Lx
2 Nezve OpenMandriva Lx 4.0
Nezve OpenMandriva Lx
Mukutanga kwayo Mandriva Linux yaive yakavakirwa paRed Hat uye yakaratidza iyo KDE desktop nharaunda, kupfuuridza nguva Vagadziri veMandriva vakatora itsvo dzavo ndokuparadzanisa nzira neRed Hat.
Saka zvakatanga chirongwa chikuru yavakashandisa nayo zvishandiso zvavo zvakawanda mukugovera.
Kunyange zvakadaro OpenMandriva Lx haina mukurumbira, ine nharaunda hombe yevashandisi uye vanogadzira vanochengetedza chirongwa ichi.Saka OpenMandriva Lx inovavarira kuve yekuparadzira kweLinux iyo inongedzera kune iyo KDE desktop nharaunda.
Pari zvino iko kugovera kuri mushanduro yayo 3.03, asi yatove pasi pekuvandudzwa uye yayo inotevera vhezheni OpenMandriva 4.0 iri kuburitswa.
Nezve OpenMandriva Lx 4.0
Vagadziri veOverMandriva vari kushanda kuvhura yavo nyowani vhezheni yeOpenMandriva Lx 4 based system.
Ichisanganisira akati wandei maficha uye ese eazvino matekinoroji. Nenzira iyi, iyo nyowani system ye OpenMandriva Lx 4.0 inouya yakasungwa neiyo nyowani KDE Plasma 5.13.
Zviripachena, iyo sisitimu ichave zvakare ichiperekedzwa neazvino nhevedzano yesoftware kubva KDE kunyorera 18.04.3.
Pindai iyo huru nhau uye inogadziridza Izvo zvinotarisirwa mukuburitswa kunotevera kwekugovera kwatinogona kuwana:
KDE Kunyorera 18.04.2
KDE Mapurani 5.47.0
LLVM / Clang 7, GCC 8.1 Glibc 2.27 uye Qt 5.11.1.
LXQt 0.13.0 uye Lumina 1.4.0 senge dzimwe nzvimbo dzedesktop
Saizvozvo, iyo OpenMandriva Lx 4 pamwe yakasvika neLinux kernel 4.18 iyo yatove mune yayo yechina vhezheni mukwikwidzi uye haizotore nguva kuti iburitswe munzira yakagadzikana.
Iyi kernel yakarongerwa kutanga kwaNyamavhuvhu 2018. Parizvino tinogona kutaura kuti zvese zviri zviviri Linux kernel ye4.17 na4.18 parizvino inopihwa muiyo Cooker vhezheni.
Izvi zvinosanganisira yakakosha RPM4-yakavakirwa system uye yazvino DNF package manejimendi masisitimu.
Pamwe chinonyanya kufadza chinhu nezve OpenMandriva Lx 4 kuburitsa inyaya yekuti Yakazara uye yakagadzirira rutsigiro rweARM64 (AArch64) uye v7 ARM zvigadzirwa zvehurongwa zvichabatanidzwa.
Saka izvi zvinoreva kuti iwe unogona kuisa iyo inoshanda sisitimu pane akawanda akadzika midziyo seRaspberry Pi.
Zvakanaka, mumashoko evanogadzira, vakagovana zvinotevera:
RISC-V bhodhi rasvika - isu tinogona ikozvino kutanga kukanda yekutanga yakavhurwa sosi CPU (isingatarisirwe kupedzisa munguva yeiyo vhezheni 4.0). Isu tave kuda kutanga kuvaka kukuru kwevanhu vese vanoda kufumura zvinhu zvisina kugadziridzwa kwenguva yakareba (kunyanya mupiro) kuti zvigadziriswe kana kubviswa.
Uye izvozvi, parizvino, kuvhurwa kunotarisirwa muna Gumiguru, kunyangwe zuva racho risina kunyatsorongwa, rinogona kuuya kare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » OpenMandriva Lx 4.0 iri pedyo kuburitswa
Jonah Perusquia Morales akadaro
Ivo vari kuvhiringidza mapeya emaapuro, muchokwadi ARM64 tsigiro yataurwa, zvisinei iyo RISC-V bhodhi quote inoreva kune imwe dhizaini.
Pindura Jonás Perusquía Morales
Debian 9.5 inosunungurwa zviri pamutemo